Tele2: izibuyekezo abasebenzi, amakhasimende, amakhasimende
Inkampani Tele2 - ngomunye umkhiqizo edume kunazo Russian ezisebenza emakethe yokuxhumana yeselula. Ngesikhathi esifanayo, le nhlangano iye usanda kuqala ukuba uthuthuke njengomuntu federal ezingeni umdlali agcwele. Owaqala njengendlela opharetha zesifunda, Tele2 brand kufikile eMoscow, futhi ulindele ukuba abe omunye abahlinzeki ehola zokuxhumana capital emakethe. Indlela ukuhlola ikhwalithi yemisebenzi enikelwa amaklayenti ayo kanye namakhasimende? Indlela elichaza Tele2 abasebenzi lomqashi wabo?
Brand ngoba Tele2, okuyinto Izibuyekezo ngokuvamile zitholakala thematic inthanethi inthanethi, usebenza e-Russia kusukela 2003. Le nkampani njengoba umdlali emakethe, okuyinto ikhule ukusukela ezingeni opharetha lesifunda nebonisa isizotha okumelwe brand kazwelonke enamandla ezaziwayo. Ngo 2013 the division Russian we brand Tele2, enomnikazi inkampani Swedish kwegama elifanayo, wathengiswa VTB Group, ngemva kwalokho inkampani uzibuse evela ehhovisi ikhanda eStockholm.
Ngo-February 2014 inkampani Tele2 (uchwepheshe Izibuyekezo uchaze lesi sehlakalo ngendlela enhle kakhulu) nge "Rostelecom" ubumbe brand new federal ukuthi engathathwa njengomsebenzi ngqo ukuncintisana ne big abadlali abathathu - the "Beeline", MTS futhi "MegaFon". Yamanje ilayisensi iphothifoliyo kwenza Tele2 ukuze bafeze imisebenzi cishe kuzo zonke izindawo eRussia futhi ukwakha, ngakho senethiwekhi yeselula namasevisi e-isikali sikahulumeni. The Inkampani igodle ukuvama 3G 4G, okwenza ikwazi ukuncintisana kwelinye kumasegmenti ezanda amasevisi mobile - ukuhlinzekwa Ukufinyelela i-Inthanethi.
Ngo-2015, wangezelela khona ezindawo ka the brand Tele2 eMoscow. Izibuyekezo abahlaziyi emakethe ngokuhunyushwa lo mcimbi cishe njengoba umuzwa - iminyaka eminingi inkampani ayikwazanga ukuba singangeni ngenkani capital emakethe Russian. Ekugcineni waphumelela. Ukuba khona brand emakethe eMoscow enezinto eziningi izici - ikakhulukazi isici ukusetshenziswa nobuchwepheshe bezokuxhumana. Ake sihlole kubo.
izici kwezobuchwepheshe eMoscow ezokuxhumana emakethe
Okokuqala, izazi zithi sha Tele2 akakwazi qalisa esiqalisweni 900 MHz eMoscow. Okungukuthi, kuze kube u-opharetha ngeke ikwazi ukusebenza enhloko-dolobha, ukuhlinzeka amasevisi e-GSM ejwayelekile. Nokho, isidingo sangempela ngoba kungenzeka ukuthi ziyashoda - ngoba, okokuqala, ukwakha ingqalasizinda entsha ye-GSM kusuka ekuqaleni akusho ngaso sonke isikhathi ukwenza umqondo, futhi okwesibili, anawo Tele2 at ezahlukene yezinye amaza. Njengokuthi nje, isibonelo, 2.1 GHz futhi 2.5-2.7 MHz. Lokhu kwenza kube nokwenzeka ukuba ngenkuthalo ukuthuthukisa umkhiqizo othile enhloko-dolobha e-ingxenye ukuhlinzeka i-Internet mobile - esekelwe 3G kanye LTE ubuchwepheshe.
Omunye umthombo atholakale sha e Moscow - lena fibre optic izintambo kusukela "Rostelecom", okuyinto, njengoba sibonile ngenhla, inkampani kakhulu ngenkuthalo ukuze abambisane nabathumbi. Inkampani i-Tele2, njengoba abahlaziyi uqaphele, unekhono enqubeni wokwandisa ukufaka imishini emisha sezihambile aspect kwezobuchwepheshe emakethe dolobha. Nakuba lezo opharetha mobile abasebenza eMoscow isikhathi eside, abakwazi njalo ukukhokhela uthuthukise ingqalasizinda, ngoba awunayo kwabasiza oyitshalile e imishini zamanje. Ngempela, ezimakethe zanamuhla kukhona amadivayisi eshibhile zonke imishini yezokuxhumana kanye kancane amandla okudla, ngaphandle iyahambisana eziphambili ubuchwepheshe zokuxhumana ezifana 3G 4G. Ngaphezu kwalokho, labo opharetha ngubani sezivele zikhona eMoscow, cishe, kuyodingeka ukuhlala ukuncintisana yokuthuthukisa ingqalasizinda zamanje. Nakuba ngezinye Tele2 kungokuhluke yesimanje.
Sha uyanda khona yayo ngezindlela ezahlukene. Ngakho, opharetha ingaqala inethiwekhi zesifunda indlela evamile - amagatsha kokuvula. Kodwa kunesinye, empeleni kuphenduke main, indlela wokwandisa isimo sendawo Tele2 - ezikhokhiswayo. Izibuyekezo Isazi mayelana imodeli yebhizinisi olunikezwa brand akhayo kakhulu. Njengengxenye amabhizinisi Franchise ingafinyelela Imiphumela umxhwele ngokuya inzuzo ebhizinisini, uma, okokuqala, uzosebenza eklanywe njengomumo womhlaba noma zenhlalo ibhizinisi ingxenye, okuyinto okwamanje ayegcwele, kanti okwesibili - bazokwazi yenze imizamo eyanele ukuheha amakhasimende amasha.
Funda ulwazi oluyisisekelo mayelana brand, thina angahlola Izibuyekezo ngakho, wenza amaklayenti namasevisi kumakhasimende kanye nabasebenzi Tele2. La maphuzu umbono kungenziwa oluthathwa ngezigaba eziningana main:
- imicabango yabantu, ukukhomba yamanani yokuncintisana Tele2;
- ukuhlola izinga izinkonzo ezenziwa inkampani;
- umbono ezingeni kwamakhasimende.
Ngakwelinye ihlangothi, ngaphakathi kulezi zigaba, ungakhetha subgroups ezahlukene Izibuyekezo - ngokwesibonelo, eziphathelene ngqo mobile inthanethi noma izwi zokuxhumana. A wodwana imibono uzohlola sha njengoba umqashi - nabasebenzi Tele2. Cabangela iphuzu okuhambisanayo umbono brand wemisebenzi Tele2, okuyinto kubhekwa, njengoba sibonile ngenhla, nathi ngqo enkulu abadlali abathathu, ngaphezulu.
Izimali ezivela Tele2 (izibuyekezo abahlaziyi emakethe eziningi, amakhasimende kanye brand abathengi ukuqinisekisa lokhu) ziphakathi kwezinto eziyishumi yokuncintisana kakhulu ingxenye. Uma sikhuluma amanani we-opharetha ku zokuxhumana ngezwi, bona kungenziwa labizwa ngokuthi ezingabizi kakhulu. Ikakhulukazi uma kuziwa amazinga ngaphakathi inethiwekhi. Ezinye zazo zikuvumela ukuba Tele2 ababhalisile ukuxoxa ngaphandle kwemingcele ngesikhathi aphansi kakhulu imali nyangazonke.
Phakathi iziphakamiso ezinjalo kusukela Tele2 - Izinga "Black". Izibuyekezo sakhe kuphela omuhle. Umbhalo Imali ngaphansi kwalesi tariff imayelana 90 ruble ngenyanga - okwenza kube ngezindleko zabo, amakhasimende opharetha nethuba ukuxhumana ku inethiwekhi kungekho sikhatsi lesitsite. Njengoba yamakholi nezinye brand mobile - ezifana kungaba kwenziwe ngamazinga ukuhlulwa. Umzuzu ikholi izobiza ruble mayelana 1-1.5. Ngokuphathelene yamanani inthanethi mobile - ezifana 3G ubuchwepheshe, Tele2 (kumpendulo yekhasimende futhi emakethe abahlaziyi uqinisekise lesi) edonsa amanani, ngokuvamile ngokuvumelana naleso ahlinzekwa ezinye ehola opharetha mobile.
Njengoba kuphawuliwe Ochwepheshe abathile, i-mobile emakethe Inthanethi eRussia libhekene i "monopolization" esingashiwongo ezivela emithonjeni abadlali ukuncintisana. Yiqiniso, lokhu akusho usole phakathi kwazo. lokhu nje ingxenye unothile kakhulu, ebonakala eqolo futhi kudinga yokutshala imali isikhathi. opharetha ngamunye kanzima kakhulu ukunikela tariffs, ngokuyisisekelo aphansi ukwedlula mncintiswano. Ephakeme intengo izipesheli, esikhundleni salokho, kufanele luxhaswe yiLungu elifanele izinsizakalo eziyikhwalithi. Kodwa izinzuzo ekhethekile kulesi noyedwa umqondo opharetha Russian azivumelekile. Abadlali ngobukhulu emakethe ukufinyelela bucishe bulingane kwingqalasizinda zobuchwepheshe kanye nezokuxhumana. Ngakho-ke, izintengo Inthanethi mobile kubo bonke abaqhubi mayelana efanayo.
Indlela ukuhlola ababhalisile ezihlongozwayo Tele2 yamanani? Izibuyekezo Customer brand abathengi mayelana amanani omuhle kuze kube sezingeni lokuba ezinjalo, ngempela, kungenziwa labizwa ngokuthi ephansi emakethe Russian. Lokhu kuyiqiniso ikakhulu, njengoba sibonile ngenhla, amasevisi bendabuko mobile - ezifana izwi, SMS. Amanani Tele2 izipesheli Inthanethi, esikhundleni salokho, efana neyalabo ukuthi zakha Big abadlali Three - kodwa lihambisana amasevisi bendabuko ezishibhile zisebenzisa ukufinyelela inthanethi ke kusukela Tele2, njengoba kwaphawula u-ababhalisile abathile bangase babe simo akukhetha kakhulu.
Uphenyo izinga izwi
amakhasimende Tele2 ukuthi bathini mayelana ikhwalithi yamasevisi bendabuko mobile - izwi, 2G-Inthanethi, i-SMS? Brand Tele2 (umthengi izibuyekezo amasevisi anikezwa kubo ukuqinisekisa lokhu) Ngokuyinhloko njengoba wesevisi eyaziwa, okwenza imisebenzi yayo emizaneni ezinkulu.
Nokho, njengoba kuphawulwe ngochwepheshe emakethe abaningi, kanye amakhasimende lenkampani, sha liba asebenzayo - ngejubane sokuboshwa leyo nobuntu umsebenzi abaqhubi Big Three - ngenkuthalo yandisa khona nasezindaweni ezikude WaseRussia. Ikhwalithi ukuxhumana ngezwi namasevisi bendabuko ezihambisana - 2G-Inthanethi ne-SMS, olunikezwa Tele2 ezingeni eliphezulu kakhulu, kungakhathaliseki isimo sendawo ababhalisile ukusebenzisa amasevisi anikezwa ngu-opharetha.
Impendulo ikhwalithi Inthanethi
Empeleni, njengoba umsebenzisi utshelwa ukuhlola Tele2 Inthanethi? Izibuyekezo amaklayenti lenkampani ngokuphathelene amasevisi afanele ngokuyinhloko predetermined zikuphi ikakhulukazi ukusetshenziswa ukufinyelela inthanethi kunethiwekhi. Iqiniso lokuthi isibuyekezo ingqalasizinda Tele2, kudingekile ukuqinisekisa ukuxhumana esitebeleni ababhalisile kwi-Inthanethi phezu iziteshi ephathekayo, ngomqondo ovulekile ayikwazi kwenziwe kanyekanye kulo lonke elaseRussia.
Kwezinye izifunda, opharetha idluliselwe ngempumelelo imigqa yakhe phezu 4G-izindinganiso zakho, kwezinye - ingakafiki womgwaqo omkhulu owedlula 3G-iziteshi. Ngakho-ke, impendulo yomsebenzisi kusukela izinhlangano ezahlukene Russian Federation ngokuphathelene nokuhlolwa ijubane ukufinyelela inthanethi ngeke ngokusobala ziyahlukahluka. Kodwa kuze kufike la izici ukufinyelela inthanethi ukuzinza enkompolo, isikhathi ping, le ukufana idatha thwebula ngesivinini, - Amasevisi Tele2 ziyahlolwa ngempela kahle.
Impendulo ku-izinga kwamakhasimende
Isimo esibaluleke kakhulu sokuthuthukisa ngempumelelo kwebhizinisi - ngesevisi yekhwalithi ephezulu yamakhasimende. kungaba inikeza inkampani nge Tele2? impendulo kwamakhasimende mayelana service - ezahlukene, futhi ngokuyinhloko subjective. ukubukwa abafanele ewusizo oluthathwa ngezigaba eziningana main:
- labo abonisa okwenzeka ukuxhumana ababhalisile ka-opharetha ne ochwepheshe brand ehhovisi futhi ocingweni;
- labo agcwele izinga inkonzo Tele2 amakhasimende abo nge-Internet.
Ake sifunde bona ngokuningiliziwe. Ngokuphathelene off-line bese ucingo ukuxhumana brand kanye namakhasimende ayo - Izibuyekezo basikisela ukuthi abantu baqonde ezingeni ikhono art Tele2 njengompristi ophakeme. Izisebenzi zale nkampani, njengoba kwaphawula u-ababhalisile Russian abonise ezingeni lelisetulu efaneleyo, ukuzibophezela ukucaciswa nganoma imiphi imininingwane ethakazelisayo yamanani izinhlelo zokuphepha kwamanye amasevisi nezici zinikeza.
Ngo Tele2 online, efana nezinye brand eziningi ezinkulu nazo imatasa namakhasimende. Kuye kwaba zokuxhumana esebenzayo kakhulu phakathi brand kanye namakhasimende amasevisi tawo, ikakhulukati ngokusebenzisa amanethiwekhi omphakathi. Labo ochwepheshe ezifeza ukuxhumana namakhasimende ngokusebenzisa imigudu efanele, ungabhalela kumazwana yikuphi ukubuyekeza noma uthumele umlayezo oyimfihlo zokubhalisa ne izincazelo ezidingekayo.
Izimpendulo ezivela kwetisebenti Tele2
Kulotshweni on isihloko inthanethi inthanethi nabantu abasebenza Tele2? Izibuyekezo abasebenzi yenkampani, okokuqala kunakho konke, kufanele zihlukaniswa kulawo ushiye ochwepheshe ababeqashwe franchisees. Kuyaqondakala ukuthi imininingwane yomsebenzi egatsheni sha, libhekene isiko ekhethekile yenkampani, izimo yemincintiswane yomholo futhi umsebenzi amathemba, zingahluka kusuka umsebenzi kule nkampani, okuyinto ibambisane Tele2 ngaphakathi franchise.
Uma sikhuluma ochwepheshe abasebenza ngqo isimo inhlangano - impendulo yabo, nakuba ngezinye izikhathi ezikhathazayo, kodwa abalingisi isimo sengqondo esihle zabantu izimo abasebenza e Tele2 namathemba yentuthuko yobuchwepheshe ne inkampani. Ochwepheshe abaningi bayavuma ukuthi ikakhulukazi uthanda umsebenzi kule nkampani nge high ukukhula kungenzeka kube nokungqubuzana, isifiso sokuvelela. Tele2 - brand ukuthi ine ancintisane abadlali abanolwazi futhi enamandla emakethe. Abaqhubi Big amathathu e izingxenye eziningi - ezifana, isibonelo, ubukhulu base zokubhalisa, kuze kube manje ngaphambi Tele2. Nokho, impendulo esuka abasebenzi, basikisela ukuthi abasha abaningi kanye nezifundiswa wazibonela abeza inkampani ngezindlela eziningi ngenxa isifiso babambe iqhaza ekuthuthukiseni ibhizinisi eside.
Yiziphi iziphetho esingayenza ukufunda amaqiniso eziphawuleka kakhulu mayelana sha empeleni esasisesisha kazwelonke ka emakethe yeselula Russian, kanye ukubukwa amaklayenti kanye namakhasimende lenkampani? Ingabe Tele2 phambili ngokuyinhloko isici ubuchwepheshe ehola opharetha mobile? Tele2 (izibuyekezo kwamakhasimende inkampani kanye emakethe ochwepheshe siliqinisekise) cishe ingabe akusizi yimuphi abadlali ezinkulu emakethe ngokuya ubuchwepheshe noma isici ukusetshenziswa amathuluzi ukuba sandise ibhizinisi layo. Sha uyanda ngenkuthalo ngesimo amagatsha, futhi ngo kohlaka Franchise eside.
Uma sikhuluma zamanani - lawa yokuncintisana kakhulu mayelana namasevisi zokuxhumana yendabuko. Nokho, labo izimali ukuthi Tele2 inikeza internet mobile ingxenye futhi ingabonwa njengoba ngokwanele ezikhangayo. Ngakho, emakethe federal yokuxhumana yeselula eRussia, umdlali omusha enamandla - opharetha Tele2. Izibuyekezo sakhe - kokubili phakathi ochwepheshe kanye namakhasimende emphakathini, ngokuvamile, kuyinto ehluke omuhle, futhi ibonisa zonke izinzuzo zobuchwepheshe nokumaketha agcwele elisha sha.
Prankery - akusiwona njalo funny. Ngobani prankery futhi kungani izisulu Prank ngokuvamile abaqondi ukuthi amahlaya abo?
MTS - Zakudala Nezanamuhla
5230 Nokia: izici, izintengo, izithombe
"Tele2": Izibuyekezo ababhalisile yamanani
Modern kwenethiwekhi futhi uhlelo ukushintsha
"Bit" ku-MTS: indlela ukuxhuma nendlela ukukhubaza?
Izitsha ngesiNgisi. ikhishi National UK: lesiNgisi elithi Christmas Pudding nephayishathi IsiZulu
Izitayela emzimbeni futhi ngokwehlukahlukana kwabo
Billionaire American Howard Hughes biography, ama-movie, izithombe
Wahlukunyezwa ubuhlungu ngemuva ekhanda?
Indlela yokwenza uthango of lukathayela: amathiphu namasu
IDonetsk: Order Ifenisha ku-inthanethi
"RED": abalingisi, futhi ikakhulukazi ukuqhubeka
Kanjani futhi kangakanani ukupheka volnushki?
Imigomo ekwindla izinsizwa
Indlela ukupheka marinade amakhowe?